Ukwabelana Ngehluleka Kwami (Nempumelelo?) | Martech Zone
Ukwabelana Ngehluleka Kwami (kanye Nempumelelo?)
NgeSonto, Novemba 9, 2008 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Isigqoko sesigqoko ku McGee's Musings lapho ngithole khona ividiyo ehlulekayo. Siyabonga ngokukhuthaza lokhu okuthunyelwe!
Looking back at my life, though, I believe my success has come because of my failures – not despite them. I've got a pretty colorful history and made many bad decisions, but it wasn't until about 5 years ago that I stopped concentrating and trying to improve what I was kubi futhi ngaqala ukuthola ukuthi ngangiyini kuhle ku. Ngaqala ukuzizungeza nabantu abangihlulela futhi bangisiza ukuhlela kahle amakhono ami kunokugxeka ubuthakathaka bami.
In my wake, I've was kudlulisiwe ngifunda esikoleni esiphakeme, nginqunyelwe isikhundla e-US Navy, ngaba nesehlukaniso, ngaqala izinkampani ezimbalwa, ngalahlekelwa yindlu futhi ngathutha izingane zami (kabili). Ngakolunye uhlangothi, ngangineziqu zemfundo ephakeme emakolishi, ngangiyiGulf War Vet ehlotshisiwe nehloniphekile, eyayinomsebenzi wokukhulisa amabhizinisi amaningi aphumelelayo, ngaba nesandla ekuthengiseni inkampani emazweni omhlaba, futhi ngibe nekhaya eliphephile njengelilodwa ubaba onezingane ezi-2 ezithembekile nezisebenza kanzima.
Ukube ubungangibuza izehlakalo ezinkulu kakhulu ezishintshe impilo yami, nginezimbili:
Ukuhlukanisa kwami. Bengingubaba onothando kodwa angikaze ngikukhombise ngize ngibhekane nethuba lokulahlekelwa yizingane zami. Isehlukaniso sami senza impilo yami yonke ibe ngeso lengqondo.
Ukusula kwami ​​enkampanini. Ngemuva kokuqongelela imali enkampanini yendawo eyayingekho eshadini, ngabekwa ngaphansi kwabaphathi abasha ababecabanga ukuthi ngiyingozi futhi ngakhishwa ngomnyango. Ngafika ekhaya, ngahlala kusofa, ngabiza umngani uDarren Grey noPat Coyle.
Pat put me to work immediately and I've never looked back. I also changed my attitude about myself and my worth to a business. I was never an isisebenzi futhi, futhi ngiqhubeke nokusebenza nezinkampani ezizonothisa impilo yami ngenkathi ngisebenza ukucebisa ezazo.
Tags: ukwehlulekaividiyo ehlulekayoAmavidiyo Wokumakethaimpumelelo
Ukubikezela kowezi-2009: Ukusesha Neselula yiKusasa
Nov 9, 2008 ngo-4: 32 PM
Ukhohliwe ukusho ukuthi umuhle ekukhuthazeni abanye. Lokhu, emehlweni ami, kuyingcebo enhle kakhulu, ngoba akekho ongakususa kuwe ngokuphanga, akukho nqaba engancibilika phansi noma ikuqhume njengamabhamuza…
Okuthunyelwe okuhle! Ngiyabonga kakhulu ngokwabelana.
Nov 9, 2008 ngo-4: 36 PM
Ngiyabonga Otir, ungumuntu onomusa ngendlela emangalisayo.
Nov 9, 2008 ngo-5: 12 PM
Okuthunyelwe okuhle kakhulu,
Ngikhumbula kahle ngesikhathi umuntu omusha etshelwa ukuthi ngingenza noma yini empilweni engibeka ingqondo yami kuyo. Futhi ngenkathi wonke umuntu owayengizungezile wayenethemba futhi ekhuthaza; akekho noyedwa owakwazi ukungisiza angiqondise futhi anginikeze nendlela yokuthi ngingawaguqula kanjani amandla ami abe ngamakhono okuthengisa nokuthi ngingavika kanjani izikhundla zobuthakathaka.
Njengomncane; Bengingumuntu ongenisa isingeniso futhi kuze kube namuhla ngithola ukuxhumana nabantu nokwenza ubudlelwano obuhlelekile ngenxa yomsebenzi wami kube yinselele.
Uma ngibheka emuva empilweni yami; Angicabangi ukuthi ngiye ngaba nokuhluleka okuningi okubonakalayo ngoba angikaze ngithathe amathuba amakhulu angaholela empumelelweni enkulu.
UDoug, ngiyabonga ngokunginika okuningi engicabanga ngakho.
Nov 10, 2008 ngo-8: 44 PM
Scott, wamukelekile kakhulu! Ungumuntu onethalente elimangazayo - ungavumeli lutho lukuvimbe.
Nov 10, 2008 ngo-8: 09 PM
Selokhu ngaqala ukuhlangana nawe, usebenze njengesikhuthazo kimi ngaso sonke isikhathi futhi okokuqala ngibe ngokungahambisani nami. Ngineqiniso ukuthi baningi abangangisekela kulokho.
Futhi, kusihlwa ekuseni, ngiyabonga ngenkonzo yakho ezweni lethu!
Nov 10, 2008 ngo-8: 45 PM
Ngiyabonga kakhulu Julie! Inkonzo yami ibiyisigaxa sekhekhe uma kuqhathaniswa namaVets ethu kulezi zinsuku.
Nov 11, 2008 ngo-8: 54 PM
Kuyathakazelisa ukuthi uthole nge- "trial by fire" ukuthi ukusebenzisa amandla akho okungenani kungenye yezikhiye zenjabulo.
Ososayensi nabo bafinyelele esiphethweni esifanayo. Ungathola uchungechunge lwamavidiyo nezindatshana ezingena kulo mqondo "wenjabulo" lapha.